Vatongi 3 | Bhaibheri repaIndaneti | Shanduro Yenyika Itsva
3 Zvino aya ndiwo marudzi+ akasiyiwa naJehovha kuti aedze+ vaIsraeri nawo, kureva ivo vose vakanga vasina kumboziva chero hondo dzipi zvadzo dzeKenani;+ 2 kwaiva kungoitira kuti zvizvarwa zvevanakomana vaIsraeri zvizive, kuti avadzidzise kurwa, kureva vaya chete vakanga vasina kumboziva zvinhu zvakadaro: 3 Madzishe mashanu akabatana+ evaFiristiya,+ nevaKenani+ vose, kunyange vaSidhoni+ nevaHivhi+ vaigara muGomo reRebhanoni+ kubvira kuGomo reBhaari-hemoni+ kusvikira kumuganhu weHamati.+ 4 Vakaramba vachishanda sevamiririri kuti vaedze+ vaIsraeri kuti zvizivikanwe kana vaizoteerera mirayiro yaJehovha yaakanga arayira madzibaba avo achishandisa Mosesi.+ 5 Vanakomana vaIsraeri vakagara pakati pevaKenani,+ vaHiti nevaAmori nevaPerizi nevaHivhi nevaJebhusi.+ 6 Vakatora vanasikana vavo kuti vave madzimai avo,+ uye vakapa vanakomana vavo vanasikana vavo,+ vakashumira vanamwari vavo.+ 7 Naizvozvo vanakomana vaIsraeri vakaita zvakaipa pamberi paJehovha, uye vaikanganwa Jehovha Mwari wavo+ votanga kushumira vanaBhaari+ nematanda matsvene.+ 8 Jehovha akatsamwira vaIsraeri kwazvo,+ zvokuti akavatengesera+ muruoko rwaKushani-rishataimu mambo weMesopotamiya;+ vanakomana vaIsraeri vakaramba vachishandira Kushani-rishataimu kwemakore masere. 9 Vanakomana vaIsraeri vakatanga kushevedzera kuna Jehovha kuti vabatsirwe.+ Jehovha akabva amutsira vanakomana vaIsraeri muponesi+ kuti avaponese, Otinieri+ mwanakomana waKenazi,+ munun’una waKarebhi.+ 10 Zvino mudzimu+ waJehovha wakauya paari, akava mutongi waIsraeri. Paakaenda kunorwa, Jehovha akabva aisa Kushani-rishataimu mambo weSiriya muruoko rwake zvokuti ruoko rwake rwakakunda+ Kushani-rishataimu. 11 Pashure paizvozvo nyika haina kunetswa kwemakore makumi mana. Otinieri mwanakomana waKenazi akazofa. 12 Vanakomana vaIsraeri vakaitazve zvakaipa pamberi paJehovha.+ Jehovha akaita kuti Egroni mambo weMoabhi+ ave nesimba pavaIsraeri,+ nokuti vakaita zvakaipa pamberi paJehovha.+ 13 Uyezve, akaunganidza vanakomana vaAmoni+ naAmareki+ kuti varwe navo. Vakabva vaenda, vakarwisa Israeri, vakaita kuti guta remichindwe+ rive ravo. 14 Vanakomana vaIsraeri vakaramba vachishandira Egroni mambo weMoabhi kwemakore gumi nemasere.+ 15 Zvino vanakomana vaIsraeri vakatanga kushevedzera kuna Jehovha kuti vabatsirwe.+ Naizvozvo Jehovha akavamutsira muponesi, Ehudhi+ mwanakomana waGera, muBhenjamini,+ murume aishandisa ruboshwe.+ Kwapera nguva yakati, vanakomana vaIsraeri vakatumira Egroni mambo weMoabhi muripo noruoko rwake. 16 Munguva iyi Ehudhi akagadzira bakatwa, raicheka nemativi maviri,+ rakanga rakareba kubhiti rimwe chete. Akabva arisungirira pasi penguo yake, pachidya chake chokurudyi.+ 17 Akapa Egroni mambo weMoabhi+ muripo wacho. Zvino Egroni akanga ari murume mukobvu kwazvo. 18 Paakanga apedza kupa muripo+ wacho, akabva arega vanhu, vatakuri vomuripo wacho vachienda. 19 Iye akadzoka ava pamakomba aicherwa matombo aiva paGirigari,+ akati: “Ndine shoko renyu rakavanzika, haiwa imi mambo.” Naizvozvo iye akati: “Nyararai!” Vose vaiva vakamira pedyo naye vakabuda maaiva.+ 20 Ehudhi akasvika kwaari zvaaiva akagara muimba yake oga yaitonhorera yepamusoro pedenga remba. Ehudhi akati: “Ndine shoko raMwari nokuda kwenyu.” Iye akasimuka pachigaro chake choumambo. 21 Ehudhi akabva apinza ruoko rwake rworuboshwe akatora bakatwa pachidya chake chorudyi akarinyudza mudumbu rake. 22 Mubato wakaramba uchipindawo uchitevera chipasa zvokuti mafuta akavhara chipasa, nokuti haana kuvhomora bakatwa racho mudumbu rake, tsvina ikatanga kubuda. 23 Ehudhi akabuda nepaburi raipinza mhepo, asi akavhara masuo eimba yepamusoro pedenga remba, akaikiya. 24 Iye akabva abuda.+ Zvino vashandi vake vakauya, vakatarira, vakaona masuo eimba yepamusoro pedenga remba akakiyiwa. Naizvozvo vakati: “Ari kungozvibatsira+ hake muimba yomukati inotonhorera.” 25 Vakaramba vakamirira kusvikira vava kunyara, asi, tarira! hapana aivhura masuo eimba yepamusoro pedenga remba. Vakatora kiyi vakaavhura, vakaona ishe wavo akawira pasi afa! 26 Asi Ehudhi akatiza pavaiverengera, uye iye akapfuura nepamakomba aicherwa matombo,+ akatizira kuSeira. 27 Paakasvika ikoko, akatanga kuridza hwamanda+ munzvimbo ine makomo yaEfremu;+ uye vanakomana vaIsraeri vakatanga kuburuka naye vachibva munzvimbo ine makomo, iye achivatungamirira. 28 Akabva ati kwavari: “Nditeverei,+ nokuti Jehovha aisa vavengi venyu, vaMoabhi, mumaoko enyu.”+ Ivo vakamutevera, vakatora mazambuko+ aJodhani vachirwa nevaMoabhi, uye havana kubvumira chero munhu upi zvake kuyambuka. 29 Panguva iyoyo vakauraya vaMoabhi, varume vanenge zviuru gumi,+ mumwe nomumwe aiva nesimba+ uye mumwe nomumwe ari murume akashinga; hapana kana mumwe chete akapukunyuka.+ 30 Moabhi akakundwa noruoko rwaIsraeri pazuva iroro; uye nyika haina kuzonetswazve kwemakore makumi masere.+ 31 Pashure pake pakava naShamgari+ mwanakomana waAnati, uye akauraya vaFiristiya,+ varume mazana matanhatu, nechibayiso chemombe; uye iyewo akaponesa Israeri.+